Exclusive: Sedex Musharax oo uu la safan karo Gudoomiyaha Cusub ee Barlamaanka Soomaaliya - Warqaad.com
Exclusive: Sedex Musharax oo uu la safan karo Gudoomiyaha Cusub ee Barlamaanka Soomaaliya
Waxaa maanta doorasho xasaasi ah oo ka dhacday xarunta golaha Shacabka lagu doortay gudoomiyaha barlamaanka Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Doorashadiisa waxaa ay daaqada ka saareysaa musharaxnimadii madaxweynanimo ee Shariif Xasan Sh Aadan, maadamaa awood qeybsi dhanka beelaha ah ay ku heleen gudoomiyaha barlamaanka.
Si kastaba, Shabakada Wararka eeWarqaad.com ayaa halkan idiinku soo gudbineysa sedex Musharax oo ay ubadan tahay in midkood uu garab siiyo Jawaari.
1- Xasan Sh: Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ayaa u ololeeyay isbahaysi ka koobnaa Hawiye iyo Daarood kuwaas oo ka shaqeeyay in Jawaari loo doorto gudoomiyaha barlamaanka.
Sababta uu Xasan Sh kursigaas ula raadinayay Jawaari ayaa aheyd in Shariif Xasan uu dhibaato xoogan ku noqon karo, sida darteed waxaa Jawaari uu noqon karaa mid la safta musharax Xasan Sh.
2- RW Cumar Cabdi Rashiid – Dad badan ayaa aamisan in beesha Daarood ay awoodooda isugu geysay in Xidig uusan noqon gudoomiyaha barlamaanka, hase ahatee XIDIG ayaa helay codadka xildhibaanadii Koofur Galbeed iyo kuwa ay Jubbaland iskala soo baxeen.
Si kastaba, Xubnihii barlamaanka ee ka yimid gobollada Waqooyi iyo Puntland ayaa codkooda siiyay Jawaari, taas ayaana keeni karta in Jawaari uu ku dhawaado siyaasada Cumar Cabdi Rashiid.
3 – Sh Shariif Sh Axmed – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa saaxada siyaasada soo saaray Jawaari oo ahaa xubin katirsan gudigii dastuur sameynta Soomaaliya.
Saaxiibtinimada labadan nin ayaa gaartay heer wanaagsan kadib markii Jawaari 2012-kii loo adeegsaday jalaafeyntii Sh Shariif uu ugeystay Shariif Xasan, kadibna ka dhigay gudoomiyaha barlamaanka.
Dad badan ayaa aamisan in sidoo kale Aala Sheekh ay kawada tirsan yihiin Shariif Sh Axmed iyo gudoomiyaha cusub ee barlamaanka, taas ayaana keeni karta inuu taageeradiisa uweeciyo dhanka musharaxa madaxweynaha Shariif Sh Axmed.
FIIRO GAAR AH: Waxaa jira musharaxiin kale oo kaalin weyn ka geystay inuu soo baxo Jawaari, waxaana kamid ah C/Raxmaan Faroole, madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale Galmudug State.